Litoania hanambara fanjakana maika amin'ny sisintany Belarosiana noho ny fanafihan'ny mpifindra monina tsy ara-dalàna
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Litoania » Litoania hanambara fanjakana maika amin'ny sisintany Belarosiana noho ny fanafihan'ny mpifindra monina tsy ara-dalàna
Vaovao Mafana Belarus • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao Mafana Litoania • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Litoania hanambara fanjakana maika amin'ny sisintany Belarosiana noho ny fanafihan'ny mpifindra monina tsy ara-dalàna.
Araka ny fomba fiasa amin'izao fotoana izao, dia azo ambaran'ny Seimas (parlemanta) ny fanjakana maika amin'ny fanangonan-tsonia ataon'ny governemanta.
Tolo-kevitra hambara mandritra ny iray volana fara-fahakeliny ny fitondrana fanjakana vonjy maika.
Betsaka ny mpifindra monina tsy ara-dalàna notarihin'ny manampahefana Belarosiana nanandrana niampita an'i Litoania.
Ireo firenena eoropeanina dia miampanga an'i Minsk ho niniana nitombo ny krizy ary mitaky sazy bebe kokoa ho an'i Belarosia.
Ny governemantan'i Litoania, tamin'ny fivoriana androany, dia nanambara ny fampidirana fanjakana maika any amin'ireo faritra manamorona an'i Belarosia mpifanolo-bodirindrina noho ny tondra-dranon'ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna, notarihin'ny Belarosian manam-pahefana, manandrana mamakivaky ny sisin-tany mankany EU Fanjakana Baltika.
"Ny fanapahan-kevitra dia noraisina tamin'ny fiheverana ny fiharatsy ny toe-draharaha any amin'ny faritry ny sisintany, atolotray ho fankatoavan'ny parlemanta," hoy ny praiminisitra Ingrida Simonyte. Araka ny fomba fiasa amin'izao fotoana izao, dia azo ambaran'ny Seimas (parlemanta) ny fanjakana maika amin'ny fanangonan-tsonia ataon'ny governemanta.
Araka ny tolo-kevitry ny Minisiteran'ny Atitany, dia manomboka amin'ny misasak'alina ny 10 Novambra any amin'ny sisin-tany sy ao anatin'ny 5 kilometatra miala azy ary koa any amin'ny toerana hipetrahan'ireo mpifindra monina avy any amin'ny firenena afrikanina sy aziatika ny fanjakana maika. Niditra tao Litoania tamin'ny alalan'i Belarosia.
Mandritra izany fotoana izany, Belarusian Nilaza ny mpanao didy jadona Alexander Lukashenko tamin'ny Talata fa heveriny fa hisy mpifindra monina maro kokoa azo antenaina avy any Afghanistan tsy ho ela.
Araka ny voalazan'i Lukashenko, tonga ireo mpifindra monina avy any Afghanistan Belarosia amin'ny alàlan'ny repoblika Azia Afovoany sy amin'ny alàlan'i Rosia.
Ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna dia notarihin'izy ireo haingana ary indraindray notarihiny Manampahefana belarosiana mankany amin'ny sisintany poloney sy litoanianina.
vondrona Eraopeanina ireo firenena dia miampanga an'i Minsk ho niniana nitombo ny krizy ary mitaky sazy bebe kokoa ho an'i Belarosia.
Niharatsy tanteraka ny toe-draharaha tao amin'ny sisintany Poloney-Belarusianina tamin'ny alatsinainy, rehefa nisy mpifindra monina an'arivony nanatona ny sisintany Poloney. Ny sasany tamin'izy ireo dia nanandrana nandrava ny fefy tariby misy barazy ary namakivaky an'i Polonina. Nampiasa baomba mandatsa-dranomaso ireo mpampihatra lalàna poloney mba hampitsaharana ireo mpifindra monina.